ကိုဩဒိနိတ်: 3°30′S 30°00′E﻿ / ﻿3.500°S 30.000°E﻿ / -3.500; 30.000
Repubulika y’u Burundi (ရွန်ဒီ)
"Ubumwe, Ibikorwa, Amajambere" (ရွန်ဒီ)
"Union, Work, Progress" (အင်္ဂလိပ်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Burundi Bwacu (ရွန်ဒီ)
ဂီတေးဂါမြို့ (နိုင်ငံရေး) ဘူဂျွမ်ဘူရာမြို့(စီးပွားရေး)[မှတ်စု ၁]
• Ruanda-Urundi၏ အစိတ်အပိုင်း
• ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံမှ လွတ်လပ်ရေးရ
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်
၁၉၆၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်
• ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်
၂၇,၈၃၄ km2 (၁၀,၇၄၇ sq mi) (အဆင့်: ၁၄၂)
၁၁,၈၆၅,၈၂၁ (အဆင့် - ၇၇)
၄၀၁.၆/km2 (၁,၀၄၀.၁/sq mi) (အဆင့် - ၂၀)
နိမ့် · ၁၈၅
ဘူရွန်ဒီ ဖရန့် (FBu) (BIF)
↑ ၁.၀ ၁.၁ While Gitega has been established as the political capital, Bujumbura is still the seat of the government and economic capital.
↑ The World Factbook – Burundi (7 August 2018)။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 31 October 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Collinson၊ Patrick။ "Finland is the happiest country in the world, says UN report"၊ 14 March 2018။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Quelques données pour le Burundi (in fr)။ ISTEEBU။ 28 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Annuaire statistique du Burundi (PDF) (အစီရင်ခံစာ) (ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ ISTEEBU။ July 2015။ p. 105။7June 2016 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ Report for Selected Countries and Subjects : Burundi။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ Gini Index, World Bank Estimate။ World Development Indicators။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်။
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်e။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-92-1-126442-5။ 16 December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံ&oldid=729429" မှ ရယူရန်
ရွန်ဒီဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။